Jawaar Mohaammad: ''Jijjiirama qeerroon dhufetu yaada Eertiraa jijjiirsise'' - BBC News Afaan Oromoo
Pireezidaantiin Ertiraa Isaayaas Afawarqiin, Ertiraan maree walitti dhufeenya bu'aa fiduuf, jila gara Finfinneetti akka argitu ibsan.
Pireeziedent Isaayyaas , Ayyaana Yaadannoo Wareegamtootaa Eertiraa har'a kabajamaa jiru irratti haasa'aa taasisan irratti jila isaanii erguuf akka ta'e kan beeksisan.
Ammatti jiilli mootummaa Ertiraa yoom Finfinneetti akka ergamu hin beekamne.
Ministirri Muummee Itoophiyaa Abiy Ahimad gaaffii nagaafi araaraa Itoophiyaan Eertiraaf dhiyeessiteef deebii gaarii kennaniif Pireezidantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii galateeffatan.
Jila mootummaan Eertira gara Finfinneetti ergu haalaan simachuuf qophii ta'uu isaaniis kara hogganaa waajjira Ministira Muummee Obbo Fitsum Araggaa beeksisaniiru.
Pireezident Isaayyaas maal jedhan?
Uummanni itoophiyaa fi Ertiraa waliin nagaa buusuu barbaaduunsaa waan haarayaa miti
Haallii naannoo isaanitti addatti ammoo Itoophiyaatti dhiyeenya ta'aa jiru dhimma xiyyeeffannaa barbaadudha jedhanii, ''Imaammata gaaga'aa Adda Bilisa Baasaa Uuummata Tigraayi(ABUT) fi hooggantoota isaaniin'' hariiroo rakkisaa biyyoota lameen gidduutti uumameen lammiileen Itoophiyaa daran miidhamuu kaasaniiru.
''Wanti lammataa guddaan dhabne kan maddu hariiroo biyyoota lameenii gaariifi guddina diinagdee naannoon kun irraa fayyadamaa ta'u jeeqxummaa ABUT'n boora'uu dha'' jechuunis Pireezident Isaayyas dubbataniiru.
Guddinni naannoo kanaa qabeenya fi dandeettii lammiilee biyyoota lamaaniin milkaa'uu kan danda'u akka tures kaasaniiru.
Gaaga'amni uummata Itoophiyarra gahaa ture humnaa ol waan ta'eef mormii uummataa 'ni gaha' jedhu kaasisuu, kunis ''shirri ABUT gara dhumaatti akka dhufu taasiseera'' jedhaniiru.
''Haalli kun taphichi xumura argateera 'game over' jedhamee ibsamuu danda'as'' jedhan.
Itoophiyaan amma ce'uumsarra jirti, galmi isaa eessa? Akkamittiin galma gaha? Gaafiileen jedhan gaaffilee ka'uu qabaniidha
''Itoophiyaan amma daandii qaxxamaaruurra ykn ce'uumsarra jirti,'' kan Jedhan obbo Isaayyaas, ''Galmi isaa eessa? Akkamittiin galma gaha? Gaafiileen jedhan gaaffilee yeroo ka'uu qabaniidha.''
''Yaada hamaa ABUT fi yaadannoo hojiisaanii badaa haquun fi miira michummaa fiduun yeroo fi ifaajjii kan gaafatu ta'us, daandiin haaraan eegalame ifa dha.''
''ABUT jijjiirama ta'aa jiru waan hin feeneef, taphni siyaasaa isaanis xumuramaa akka jiru waan beekaniif, naannicha tasgabbii dhabsiisu hin dhiisan.''
Haalota aangoo isaanii ittiin tursiisuuf yaalanii fi jijjiirama ta'aa jiru itti danqan keessa tokko Ertiraa keessatti muddama uumuu fi qoqqobbii kaahan itti fufsiisuudha jedhanii kan amanan akka ta'es ibsa miidiyaa biyyattiin kallatiin darbe irratti himaniiru.
''Akkuma gama Ertiraan jiru, gama lammiileen Itoophiyaa nageenyaa fi waliin jireenya gaarii ni fedha. guyyoota darban keessa ergaaleen dabarfamaa turen filannoon isaanii kan ta'uu mul'isa'' jedhaniiru.
Fedhiin lammiileen biyyoota lameenii waliin badhaadhuuf qaban bu'uura aarsaa dhaloota lamaan darbanii waan ta'eef ammas gama isaaniin dhimma hunda dura si'oominaan irratti hojjetana akka ta'es eeraniiru.
''Kanumarraa ka'uun jila yaada jijjiiramaa amma jiru ifatti fi gadi fageenyaan ilaaluu fi fuulduratti wantoota hojjetamuu qaban karoorsu gara Finfineetti ni ergina'' jedhan.
Ji'a lama dura Ministira Muummee ta'uun gara aangootti kan dhufan Dr. Abiyy Ahimad, hariiroo Itoophiyaan Eeertiraa wajjin qabdu fooyyessuu akka barbaadan kan himan, guyyaa muudamanii aangoo qabatan haasa'aa lammiilee biyyattiif taasisaniin ture.
Koree hojii raawwachiiftuun ADWUI's waliigaltee Aljeers bara 2000tti hooggantoota biyyoota lamaan gidduutti mallattaa'e guutummaan guutuutti akka waliigalu tibba kana beeksisuunis ni yaadatama.
Tartiiba taatewwanii Itiyoo-Ertiraa
Xiinxaltoonnni maal jedhu?
Daayreektarri olaanaa OMN fi xiinxalaan Siyaasaa Jawaar Mohaammad, hooggnatootni biyyoota lameenii marii araraa eegaluuf murteen murteessan sirrii dha jedh.
''Muummichi ministeera lola biyyoota lachuu miidhe guduunfaa itti gochuudhaaf, araara buusuudhaaf tarkaanfiin mataa isaatiin fudhate sirrii ture'' jedha Obbo Jawaar.
''Pireezident Isaayyaasis mataa jabaachuudhaanii kan hamatamu, amma garuu san dhiisee araara buusuudhaaf deemuun isaanii waan sirriti''jechuun biyyoota lameeniifu waan gaariidha jedha.
Walitti bu'iinsi biyyoota lameenii lola daanga qofa osoo hin taane olaantummaa siyaasaa argachuuf fedha ture akka ta'es obbo Jaawaar ni Amanu.
''Qabsoo qeerrootiin Itoophiyaa keessatti olaantummaan ABUT guyyaadhaa guyyaatti barbadaa'aa deemaa jirachuun, hunda caala humni Oromoo cimee as bahuun isaa warrii Eertiraa yaada isaanii akka jijjiiran waan godhe natti fakkatas'' jedha.
Isaayyas Afawarqiin hasa'aa isaanii keessatti 'game over' jechuun isaanii olaantummaan ABUT dhumateera jechuu isaanii akka ta'e kaasuun ''dantaa dhuunfaaf jecha ABUT Itoophiyaa fi naannoo san jeequufi gooluun dhumee jira'' jechuudhas jedha.
''Sudaanirraa hanga Eertiraatti, Itoophiyaarra hanga Kuwaatariitti Oromoon aangootti dhufuu wanti deeggaraniif madda tasgabbii, madda nagayaa, madda obboleeyyummaa naannoo saniiti jedhanii waan amananiifi muummichi ministeeras kan ifatti waan agarsiisaniifi'' jechuun sochiin jiijiiramaa biyya keessa tokkummaa biyyoota baha Afrikaa bu'a akka buusu Obbo jawaara dabalanii ibsaniiru.
Waamicha mootummaa Itoophiyaa
Koreen Hojii raawwachiiftuun ADWUI walgahii idilee isaa Waxabajjii 5, 2018 eegaleen, wal diddaa Itoophiyaafi Ertiraa jidduu tureef furmaata waaraa kennuuf jecha waliigaltee Aljeersiifi murtee Komishiinii Daangaa akka fudhatu ibseera.
Waldiddaa ummattoota obboolota biyyoota lameenii jidduu ture hiikuun nageenya walitti fufiinsa qabu uumuuf waamicha daabarseera.
Wal waraansi ALI bara 1990tti eegalee tures, walitti bu'insa daangaa biyyoota Afriikaa kamiyyuu caalaa kan gama lamaaniinu lubbuu namoota hedduu galaafate ta'u kan eere ibsichi, kanneen kumaatamaan lakkaa'amanis naannoo daangaatii buqqaafamaniiru.
Walumaagalattis, waggoota 20 darban keessa ummattoota gama lamaan irrayyu dhiibbaa dinagdee, hawaasummaafi siyaasaa bal'aan gahusaas himeera.
Kanaafuu, walitti dhufeenyi biyyoota lamaan maal ta'u mala? jedhus gaaffii lammiilee Itoophiyaafi Ertiraa akkasumas kan hawasa addunyaa ta'ee tureera.
Wal waraansaaan boodas jaaarsummaa dhabbata motummoota gamtoomaniifi Gamtaa Afriikaatiin waliigalteen Aljeersi taasifamus, waggoottan 20 darbaniif nageenyis ta'e waraanni osoo hinta'iin turaniiru.